Topnepalnews.com | कसको संरक्षणमा भइरहेको छ बम हमला ? कांग्रेस संस्थागत रुपमै सक्रिय त छैन !
Posted on: December 06, 2017 | views: 747
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला उम्मेदवार लक्षित गरि बम पड्काउनेहरु विप्लव समूहका मात्रै नहुन सक्छन् । तर, यो हत्या हिंसाको मुहान विप्लव समूह नै हो, जसले नबोलिकन हिंसालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । रुकुममा माओवादी नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा लक्षित आक्रमणबाट सुरु भएको हिंसात्मक गतिविधि राजधानी काठमाडौंसम्म छिरेको छ ।
सुरुमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि लक्षित गरेर गरिएका यस्ता हिंसात्मक घटनाप्रति सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस मौन देखिएको छ । उसको मौनता र हमलाकारीप्रति सरकारको नरम प्रस्तुतीले यस्ता भूमिगत अपराधमा कांग्रेसप्रति आशंका बढ्दै जान थालेको छ ।
विभिन्न गतिविधि र कार्यका आधारमा हेर्दाखेरि विप्लव माओवादी अब राजनीतिक शक्तिका रुपमा नभएर ‘राजनीति’ को कभरमा आतंकवादी गतिविधिमा लाग्न थालेको देखिएको छ । चुनाव बहिस्कारका नाममा उसले सर्वसाधारण नागरिकमाथि समेत आतंककारी हमला गरिरहेको छ । तर, उसले आफूलाई राजनीतिक पार्टी बताउन छाडेको छैन ।
विप्लव माओवादीको गतिविधि तराई मधेसमा एक समय देखिएको ज्वालासिंह र गोइत समूहको जस्तै प्रतीत हुन थालेको छ । यद्यपि ज्वालासिंह र गोइतले व्यक्ति हत्या र सिहंसाका घटनाहरु गराएपछि आफूले गरेको भने स्वीकार्ने गरेका थिए । विप्लव माओवादीले अहिलेसम्म कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन ।
विप्लव समूहकै नाममा दिनहुँ हिंसात्मक घटनाहरु भइरहँदा पनि सो समूहका नेताहरु मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी लिने इमान देखाउन सकेका छैनन् । विगतमा माओवादी पार्टीले कतिपय घटनाहरु गराएपछि त्यसको जिम्मा लिने गरेको थियो । तर, विप्लवले एउटै पनि बम काण्डको जिम्मा लिएका छैनन् ।
ती घटनाहरु आफूले नगरेको भनेर उनले खण्डन पनि गर्न सकेका छैनन् । यथार्थमा विप्लव समूहले जनतालाई गुमहराहमा राखेर हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । राजनीतिकभन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको विप्लव समूहको पतन ज्वाला सिंह र गोइत समूहकै रुपमा भइसकेको स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले चुनाव लक्षित यस्ता आक्रमण गर्ने समुहप्रति आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छैन । उसले केही ठाउँबाट पक्राउ गरेका ब्यक्तिहरु विप्लव समुहका कार्यकर्ता भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको छ । न त विप्लव समुहले नै यी हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ । विप्लव समुह आफूले हमला गरेको हो पनि भन्दैन र होइन पनि भन्दैन ।
सरकार आक्रमणकारीलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि दिंदैन । बरु उक्त समुहप्रति नरम नीति अपनाउँछ । बरु यस्ता हमलालाई विपक्षी उम्मेदवारमाथि दोष थोपरेर आक्रमणकारीलाई चोख्याउनेगरी प्रतिक्रिया दिने काम कांग्रेस नेताहरुले गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षको घरमा ठूलो मात्रामा विष्फोटक पदार्थ भण्डारण गरिएको किन फेला पर्यो ? यी यावत प्रश्न छन् जसले चुनावी लाभका लागि भए पनि सत्तारुढ कांग्रेस यस्ता हिंसात्मक कृत्यलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ भन्ने शंकामा बल दिइरहेको छ । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि आम नरसंहारकारी बम हमलाका प्रमाणित दोषी संजय साह टकलासँग जेलबाटै चुनावी सहयोग लिइरहेका छन् । आतंक र हिंसाको दोहोरो लाभ लिने कार्यमा कांग्रेस संस्थागत रुपमै त सक्रिय छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उब्जाएको छ ।